Mamwe marobhoti iwe ausingazive akashanda neLinux | Linux Vakapindwa muropa
Haisi chinyorwa chekutanga chatinozvipira kwachiri marobhoti uye drones MuLxA, kutaura zvazviri takatotaura kanoverengeka nezve mapurojekiti akaita seROS uye mamwe marobhoti anoshanda nekutenda kuLinux. Zvakanaka, nhasi tiri kutsikisa chinyorwa ichi zvakare nemubatanidzwa nemamwe marobhoti ekutengesa aunonyatsoziva kana iwe unogona kunge uri muridzi wawo uye hauna kana kuona kuti vanoshanda nekutenda kuLinux mumoyo wayo wemagetsi.
Kana iwe uchirangarira, isu takaitawo mabvunzurudzo naErle Robotic pano uye ndokutumira zvimwe zvezvinyorwa zvake zveLinux-based uye ROS (Robhoti Inoshanda Sisitimu)Mavari ndakatarisira kuona kuti kukosha kweLinux mumarobhoti anhasi kunoonekwa. Muchokwadi, iyo OSRF (Vhura Sosi Robhoti Founation) yakavambwa kuti igadzirise uye kusimudzira kuvandudza kweROS uye maturusi epasi robhoti. Zvakanaka, kure nemarobhoti ayo anoshandiswa muNASA, ayo anoshandawo neLinux, uye mamwe marobhoti akaomesesa, ikozvino isu tichazotarisa pane mamwe marobhoti kana epedyo marobhoti:
Roomba: Zvakadii neiyo iRobot gadget? Iwe une chokwadi chakarembera chakakomberedza imba yako izvozvi. Iyo irobhoti yekutsvaira inoona kuchengetedza imba yakachena, uye kunyanya mazana mashanu anoteedzana anoshandisa ROS neLinux kuchengetedza pasi mumba mako sejeti regoridhe.
mhiripiri: iyi haisvikike zvakadaro, asi pamwe ichakurumidza Iyo irobho rinodzora rinotarisira kuita kuti kugara kwako kubhangi kunakidze. MaJapan akagadzira robhoti ino kutsausa vatengi vemu bhangi ivo pavanenge vachishandirwa.
Sawyer- Iri ruoko rwe robhoti rwakagadzirwa naRethink Robotic kuti ishandiswe munzvimbo dzemabhizimusi uye kubatsira vanhu mukugadzira maseketi. Chokwadi kune mumwe munhu anoshanda neimwe yeizvi ...
DronesAya marobhoti asina kubhururuka ayo iwe aunotyaira kana ari kufunga nezvazvo, zvakanyanya, kunze kwematoyi anodhura uye drones, kazhinji anomhanya nekutenda kuLinux.
Kicheni marobhoti: hongu vanababa, mamwe marobhoti ekicheni anoshandawo nekutenda kuLinux. Iyi ndiyo kesi yaMoley, nyanzvi yekubika yakagadzirwa musimbi, mapurasitiki nemagetsi macircuit.
Sezvandinogara ndichitaura, Linux Iri munzvimbo dzakawanda kupfuura dzaungafungidzira. Iwe pamwe ikozvino wakakomberedzwa nehurongwa hunoshanda neLinux uye hauzive ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mamwe marobhoti iwe ausingazive akashanda neLinux